Igqitywe njani i-BoomTown Stack yayo yeMartech ngobukrelekrele bokufowuna | Martech Zone
Incoko, ngakumbi umnxeba, iyaqhubeka nokuba phakathi kweyona ndlela isebenzayo yokunxibelelana nabantu nokubenza abathengi abathembekileyo. Ii-Smartphones zivale umsantsa phakathi kokukhangela kwi-Intanethi nokwenza iifowuni- kwaye xa kufikwa kuthengiso oluntsonkothileyo, lwexabiso eliphezulu, abantu bafuna ukungena emnxebeni kwaye bathethe nomntu. Namhlanje, itekhnoloji iyafumaneka ukongeza ukuqonda kwezi fowuni, ke abathengisi banokwenza izigqibo ezifanayo, eziqhutywa ziidatha malunga neefowuni abazenzela amajelo edijithali.
At I-BoomTown, Sityalomali kakhulu biza itekhnoloji yobukrelekrele. Siyinkampani yesoftware yokuthengisa kunye nentengiso enceda iinkampani ezithengisa izindlu nomhlaba ukuba zivale isivumelwano. Ngenxa yokuba isisombululo sikwixabiso elineenombolo ezintlanu, abathengi bethu abayi kuthenga- okanye bazibophelele kwidemo- ngaphambi kokuba bafike kwifowuni nomthengisi wentengiso. Ngenxa yoko, iifowuni zethu ziyakhala ngalo lonke ixesha.
Ngokwengxenye, luhlobo lweshishini lethu elo. Abantu bearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba bayathanda ukuthetha- banesakhono sokuxoxa, kwaye bayathanda ukwenza ishishini ngomnxeba. Kodwa kukwayindalo yeshishini namhlanje: abantu bayakhangela, bayakhangela kwaye bayatsalela umnxeba kwiifowuni zabo njengoko behamba kwindlela yokuthenga. Kubalulekile ukuba iqela lethu lentengiso libe nokuqonda kokulandela, ukuhlalutya kunye nokwandisa ezi fowuni zingenayo, kwaye iqela lethu lokuthengisa lixhotyisiwe ukuphendula iifowuni ezinokuthi ziguquke.
Sityalomali Ilifu lokuThengisa ngeLizwi lika-Invoca ukongeza umaleko wokuqonda ujikeleze ijelo iqela lethu lokuthengisa elisebenzisa kakhulu. Olu datha longezelelekileyo luvumela ukuthengisa kunye namaqela ethu okuthengisa ukuba asebenze ngokukuko kunye-abaxhasi bethu banokuthatha iifowuni ezininzi kwaye bafumane ixabiso ngakumbi kuyo nganye, kwaye iqela lethu lezentengiso linokuthi amaphulo ethu akhokele aguqula umnxeba.
Ngokujika nje i-Invoca, kwangoko sinciphisa iindleko zethu zokhokelo (CPL) kwisiqingatha. Kungenxa yokuba sikwazile ukuba zonke iifowuni zethu zikhokelele kwimikhankaso eyahlukeneyo yedijithali ithemba okanye umthengi onxibelelane naye ngaphambi kokuba asitsalele umnxeba. Sifundile ukuba akukho mntu ufowunayo kwaye ucacisa iinkcukacha zendlela abavile ngayo ngathi- siyabona ukuba bafuna ixesha, bacofa ikhonkco, benze uphando, bathetha nabahlobo abambalwa malunga nezinto abanokukhetha kuzo, benza umnxeba . Kule ndlela intsonkothileyo yokuthenga, banokuxelela abathengisi bethu ukuba bavile ngathi "ngegama-lomlomo."
Ndiyakholelwa ukuba ukubiza ubukrelekrele yinto eyimfuneko kushishino namhlanje, kwaye kukho izinto endizifundileyo ezinokunceda abanye abathengisi ukuba baqalise ngale teknoloji intsha yokuthengisa.
Ukuqalisa ngobukrelekrele bomnxeba
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka ujonge kuzo xa kuvavanywa ababoneleli bobukrelekrele. Eyokuqala kukufakwa kwenombolo okuguqukayo. Ukufakwa kwenombolo yeDynamic kukuvumela ukuba ubeke enye inombolo yefowuni yenkampani kwi-asethi yokuthengisa-iphepha lokufika, i-eBook okanye iphepha lentengo lewebhusayithi, umzekelo-ngenani elikhethekileyo elidibanisa nomthombo wefowuni nganye. Oko kuthetha ukuba uyayibona idatha yegranular njengegama elingundoqo lomntu ofowunileyo akhangele kuye, intengiso abacofe kuyo, kunye namaphepha ewebhusayithi yakho abakhangele kuyo ngaphambi kokuthatha ifowuni.
Usebenzisa u-Invoca, umthengisi wentengiso angalubona lonke olu lwazi ngalo mzuzu xa kukhala iifowuni. Banamanye amanqaku edatha axabisekileyo, anje ngeniso yomntu ofowunayo, imbali yokuthenga kunye nedemografi, ebanika umfanekiso womntu kwelinye icala lomgca. Ndicebisa ukusebenzisa olu lwazi ukuhambisa umnxeba kummeli ofanelekileyo ngexesha-labathengi abasele bekhona okanye amathemba e-VIP kwivenkile yakho yokuthengisa, umzekelo.
Kubalulekile ukusebenzisa iqonga elidibanisa kakuhle nentengiso yakho esele ikhona kunye nentengiso yetekhnoloji yokuthengisa. Sisebenzisa ii-Invoca's Umdibaniso we-Facebook ukuqonda ukusebenza kweenkqubo zethu zentengiso; Oku kuyasazisa ukuba ngubani kwabafowunelwa baphenjelelwa ziintengiso kuFacebook kuhambo lwabo. Oku kuluncedo ngakumbi ngoku ekubeni sicofa-ukubiza iintengiso ngqo kwiFacebook Brand Page yethu nakwiintengiso zethu kuFacebook.
Umdibaniso weSalesforce usivumela ukuba singene kulwazi lwethu lwabathengi kwaye sakhe iprofayili ekhokelayo kulowo nalowo ufowunayo. Abaphengululi bethu banokubona apho ifowuni ivela khona, ngubani osemgceni kunye naluphi na unxibelelwano lwangaphambili abanalo nenkampani yethu. Oku kususa uninzi lwee yima uqalise imeko yeefowuni zokuqala; Abathengisi abathengisayo banokuqinisekisa nje ngeenkcukacha esele benazo.
Iifowuni ezimfutshane zigcina amathemba onwabile kwaye zibonisa ukuba siyalixabisa ixesha labo. Oku kukhulule nexesha lokubuya kwethu-iqela lethu lokuthengisa lithatha malunga neefowuni eziyi-1,500 ngenyanga, kwaye obu buchwephesha bunqamle ixesha lokufowuna ukuya kuthi ga kwi-1.5 ukuya kwimizuzu emi-2.5 inye. Oku kukhululiwe iiyure inyanga nganye i-reps inokuchitha ukwenza ishishini elininzi.
Ukwafuna iqonga elikuvumela ukuba uhlalutye umxholo wencoko eyenzeka kwifowuni ukuphembelela amaphulo okukhulisa kwikamva- okanye kwezinye iimeko, sebenzisa loo mxholo ukuze musa ukondla abathengi esele bethengile kwifowuni. Oku kunokuziva kusisithulu kubathengi abalindela ngakumbi ukuba iinkampani zibonelele ngenkonzo eyeyakho kumajelo onke.
Ukuzimisela ukuze ube yimpumelelo
Ngoku siyabona ukuba iifowuni zethu zivela phi, ngubani osemgceni kunye nomxholo wefowuni. Ukwenza inkqubo enje ngalo msebenzi, ndingacebisa ukuthatha amanyathelo asisiseko ukufumana ukuqonda ngakumbi kwiifowuni ezingenayo:
Khuthaza iinombolo zefowuni kwiphepha lakho lasekhaya, iphepha lamaxabiso kunye nayo yonke imijelo yentengiso onayo- intlalontle, ukukhangela, amaphepha amhlophe, iiwebhu, iminyhadala yenkampani, nkqu neepodcast. Yenza kubelula ukuba abantu bakubize.
Tyala imali kwi-click-to-call ads kwiintengiso zakho zentlalo kunye nokukhangela, ukuze abantu abakhangela okanye abakhangele kwiselfowuni bangatyhala iqhosha kwaye bakubize ngqo.
Sebenzisa iinombolo zefowuni ezinamandla kwimpahla nganye, ngaloo ndlela unokuhlala ubona apho zivela khona iifowuni. Kubalulekile ekuphuculeni i-ROI yentengiso.
Qala ukucinga malunga neefowuni njengoko unokwenza iiasethi zakho zedijithali- kwaye ubanga inqanaba elifanayo lokubonakala kwinto esebenzayo nengasebenziyo.
Sifunde okuninzi apha endleleni kwaye safumanisa ukuba ezinye zeengcinga zethu azichanekanga. Ekuqaleni, besilindele ukuba ubukrelekrele bunyuse inani lethu lilonke lezikhokelo. Kwakungekho njalo-kodwa ukuba nolwazi ngakumbi kubafowunelwa bethu kunye namaphulo aphembelele indlela abaziphethe ngayo abaxabiseke ngakumbi. Sigcwalise isikhewu esibalulekileyo kwisitokhwe sethu sobugcisa bokuthengisa, silungiselelwe iifowuni ezinexabiso eliphezulu ezikhokelela kuguquko olungakumbi, kwaye sidale awona mava mahle kubantu abakhetha ukusitsalela umnxeba.
tags: biza ubukrelekreleukulandelela umnxebaiteknoloji yokulandelela umnxebaiindleko nganye ekhokelayoukulandelela umnxeba nge-facebookfacebook iifowuniUkuhlasela
TubeMogul: Ukucwangciswa kweNtengiso yeVidiyo yeDijithali kunye nokuThenga amajelo onke